Nzira yekuwana sei inyanzvi yekutsvaga injini optimization nyanzvi?
Ecommerce bhizinesi mabhizimusi, webmasters, kana vashandi vekutsvaga vekutsvaga paIndaneti - vose vakanyatsotarisana nechinangwa chimwe chete. Chinangwa chavo chikuru ndechokuti webhusaiti iyi ionekwe pamusoro pekutsvaga kwekutsvaga injini peji (SERPs). Zvinosuruvarisa, kurega vanhu vose vanogona kunzwa vaine ruzivo rwehutano hwechokwadi hunotsvaga yeSearch Engine Optimization (SEO), kwete kutaura avo vanopa vhizimusi mashizha mabasa, kana kushanda mune rimwe boka, kana kuti full-stack dhigirii rejecha rekutsvaga injini yekugadzirisa nyanzvi. Ndicho chikonzero vazhinji vedu tinowanzoedza kuongorora nyaya yacho pachayo, kunyange ichizivikanwe kuva kushanda zvakanyanya-nguva uye yekudya nguva yakawanda yezvimwe zvipi-iwe-iwe-iwe pachako mhinduro. Saka, isu tiri pakupedzisira tichiuya kusvika pachinzvimbo - tichifunga kudikanwa kwekushanda chete maSeO mazano nehuwandu hwakajeka hwekufambira mberi, pano kunouya kudiwa kwakakosha kuhaya vamwe vane ruzivo rwekutsvaga injini optimization nyanzvi. Asi ungawana sei unyanzvi anovimbika kana kambani mune iyo profusion yezvinodiwa zvinowanikwa paInternet? Nzira yekuita sei musiyano pakati pechiratidzo chaiyo, aine simba SEO mupiki, kana kunyange zvinokanganisa zvinenge zvichingoita shanduro yekugadzirisa inyanzvi? Ndinotenda kubvunza mibvunzo inotevera nekucherechedza mhinduro dzakapiwa nevakatsvaga inogona kuva nzira yakanakisisa yekuziva ndiani ndiani. Saka, regai tione.
Bvunza vanovimbisa SEO vashandi kuti vakuratidzei uchapupu hwavo, ini. e. , rwandu rwevashandi vavo vekare uye vakamira. Iko chaiyo yekutsvaga injini yekugadzirisa nyanzvi haizombozeze kukupa iwe wose ruzivo rwakakosha nemashoko ekubatana. Kuita kudaro, unogona kukurumidza kuona kana SEO mupiki akakodzera, kana kuti kwete. Iwe unogona kungotarisa chero ipi zvayo yepambani yemapurogiramu chero ipi zvayo yakaguma yakajeka mune zviri nani kutsvaga rankings.
Vabvunze kuti ivo vachazoita sei kuti webhusaiti yako ive nani pane SERPs. Unyanzvi weSeO authority hauzomboregi chero, kunyange yakadzika, kukurukurirana kana kubvunza. Iwe unofanirwa kuratidzirwa zvakananga nguva yakatarwa nemabasa avo eSeO kuuya nechinzvimbo chako chekufambira mberi nhanho nechitanhatu apo unosangana nezvinangwa zvako zvose pakuguma.
Iva nechokwadi chokuti uve neunyanzvi hwekutsvaga hunowanikwa kune zvavanenge vaudza nekambani yavavari kupa. Mushumo wakadaro unofanirwa kuvhara rondedzero yezvinetso zvose zvekambani webhusaiti yako inotarisana nenguva yacho. Ndinoreva kuti unofanira kuratidzirwa pakarepo izvo nyaya, kunyanya, dziri kudzivirira nzvimbo yako kubva pakusimudzira.
Tarisa kuti nenzira ipi iyo nyanzvi dzekutsvaga injini yekutsvakurudza dziri kuenda kunyoresa webhusaiti yako statistics. Panguva imwe chete, iva nechokwadi chokuti vari kupa vese vese vashandi nekuwana zvakananga kana zvishoma kugoverana kwezvakawanikwa zvezviwanikwa zvavo, zvakatsigirwa nemashoko akajeka kubva kuGoogle Analytics.
Uye pano tiri kuuya kumubvunzo unokosha kwazvo. Ingovabvunza kana vakakwanisa kukupa chivimbiso chekuratidzwa pamusoro peSERPS, ndinoreva kutora nhamba yepamusoro nhamba yezvitsvaga zvekutsvaga. Zvinofanira kuitika kuti iwe unopiwa mhinduro yakasimba, usanonoka kubva "unyanzvi" wakadaro pfupi pfupi. Real search engine optimization nyanzvi haazombotauri muteresi zvakadai zvisina maturo. Vaya vasina unyengeri, kana zvakanyanya kuipa, vanyengeri vanogona kunge vachiita sezvo kuti vanyepedze nevashambadziri vasina ruzivo uye vasina ruzivo Source .